ကိုယ်ပိုင် ပရောဂျက် များ
မင်္ဂလာပါ ။ ကျေးဇူးပြုပြီးခဏစောင့်ပါ ရန် ။
ပိုင် ၏ ကိုယ်ပိုင် ဝဘ်ဆိုက်
အချက်အလက် ၊ ပရောဂျက်များ နှင့် အရေးအသားများ
ဆော့ဝဲလ် နှင့် ဝဘ်ဆိုက်တည်ဆောက်ခြင်း ၊ LAMP ၊ MEAN ၊ Python ၊ Hybrid အက်ပ် များ (Electron / Cordova) ၊ Arduino
စိတ်ဝင်စားမှု / ဝါသနာများ
ဂစ်တာ၊ အရှေ့တိုင်းဝါးပုလွေ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ ၊ ကာတွန်း ရုပ်ရှင် ဖန်တီးမှု ၊ ရိုးရာ / ဒီဂျစ်တယ် အနုပညာ ၊ ပန်းချီဆွဲ ခြင်း ၊ Interactive မီဒီယာ နှင့် ရှေးရိုးပုံပြင်များ
ဘလော့ဂ် ၊ သင်္ချာ နှင့် သဘာဝ သိပ္ပံ ၊ အလုပ်အကိုင် စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်ခြင်း ၊ LaTeX Typesetting ၊ IB သင်ရိုးညွှန်းတမ်း စသည် တို့ နှင့် သက်ဆိုင်သော သင်ခန်းစာများ / အရေးအသားများ
ကျွန်ုပ် နာမည် ပိုင် ဖြစ်ပါ တယ် ။ အလွတ်တန်း ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်မာ တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး အနာဂတ်မှာ ကွန်ပျူတာအင်ဂျင်နီယာ တစ်ဦး ဖြစ် ဖို့ လေ့လာသင်ကြားနေပါတယ်။ ယခု လောလောဆယ် အဘူဒါဘီ ရှိ နယူးယောက်တက္ကသိုလ် မှာ ကွန်ပျူတာအင်ဂျင်နီယာပညာ နဲ့ တရုတ်ဘာသာစကား ကို ပညာသင်ဆု နဲ့ သင်ကြားနေ ပါတယ်။ နောင် အနာဂတ်မှာ အများပြည်သူ တတ်နိုင်သော အကျိုးပြု နည်းပညာများ ကို ဖန်တီးရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိ ပါတယ်။
ကျွမ်းကျင်မှုများ ။ ။ ဆော့ဝဲလ်၊ ဝဘ်ဆိုက်တည်ဆောက်ခြင်း နှင့် ဂရပ်ဖစ် ဒီဇိုင်း ပညာ များကို နေ့စဉ် စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့လာ ထားပါတယ်။ ကျွန်ုပ် ၏ ယခင် တည်ဆောက် ထားသော နည်းပညာ ပရောဂျက် အဖုံဖုံ ကို အတွေ့အကြုံ ၊ ကိုယ်ပိုင် ပရောဂျက် များ နဲ့ ကျွန်ုပ်၏ Github စာမျက်နှာ များမှာ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှု နိုင်ပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားမှု / ဝါသနာများ ။ ။ ကျွန်ုပ် အရာ များစွာကို (၎င်းတို့၌ မကျွမ်းကျင် သော်ငြားလည်း) စိတ်ဝင်စား စရာ ကောင်းတယ် လို့ ယူဆပါတယ်။ အားလပ်ချိန် မှာ အပျော်တမ်း ပန်းချီဆွဲ ခြင်း ၊ အပျော်တမ်း ကာတွန်း ရုပ်ရှင် ဖန်တီးခြင်း ၊ ဂစ်တာတီးခြင်း ၊ အရှေ့တိုင်းဝါးပုလွေမှုတ်ခြင်း၊ အပျော်တမ်း သံစဉ် များ စပ်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်း နဲ့ အများပြည်သူ အကျိုးပြု ဆော့ဝဲလ် ရေးသားခြင်း များကို နှစ်သက်ပါတယ်။
အသိအမှတ်ပြု ခံရ မှု များ ။ ။ githubstars.com ဝဘ်ဆိုက် မှထုတ်ပြန်သော ရန်ကုန် ၊ မြန်မာရှိ Github ပေါ် တွင် ထိပ်ဆုံး ပရိုဂရမ်မာ ၇၅ ဦး စာရင်း မှာ ကျွန်ုပ် ကို တစ် ဦး အပါအဝင် စာရင်းသွင်းထားပါတယ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ ဟောင်ကောင် ဟားဗတ် ကလပ် မှ ပေးသော ဟားဗတ် စာအုပ် ဆု ရရှိ ပါတယ်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မှာ ကျောင်းဝင်း အတွင်း လူအများကို ကူညီ မှု အတွက် Kiwanis Service Award ဆု ရရှိ ပါတယ်။
သုတေသန စိတ်ဝင်စားမှု များ ။ ။ အကယ်၍ အနာဂတ်မှာ ကျွန်ုပ် သုတေသန နယ်ပယ် ၌ ဆက်လက် ကျင်လည် ရမည် ဆိုလျင် အုပ်စုအသိဉာဏ်ရည် (Swarm Intelligence) နဲ့ စက်ရုပ်ငယ်အုပ်စု (Swarm Robotics) များ က ကျွန်ုပ် သုတေသန ပြုလုပ်ရန် စိတ်ဝင်စားသော နယ်ပယ် များ ဖြစ်ပါတယ် ။
အရေးအသားများ ။ ။ ကျွန်ုပ် ၏ ဟောင်ကောင် အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝ နှစ်နှစ်တာ (၂၀၁၈-၂၀၂၀) အကြောင်း အသေးစိပ် ကို ကျွန်ုပ် ၏ ဘလော့ဂ် ပေါ်မှာ ရေးသားထားပါတယ်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ် အား မေးမြန်းရန် မေးခွန်း တစ်စုံတစ်ရာ ရှိပါက (သို့မဟုတ်) ကျွန်ုပ် အား နည်းပညာ / ဒီဇိုင်း ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း အပ်နှံ လိုပါက ဆက်သွယ်ရန် စာမျက်နှာ မှတစ် ဆင့် ဆက်သွယ် နိုင်ပါတယ် ။
ကျွန်ုပ် ၏ ပရောဂျက် များကို Patreon ပေါ်တွင် ထောက်ပံ့ နိုင်ပါသည်။
အောက်ပါ တို့သည် ကျွန်ုပ် အားလပ်ချိန် တွင် တည်ဆောက် ထားသော ကိုယ်ပိုင် နည်းပညာ ပရောဂျက် များဖြစ် သည်။ ၎င်းတို့ သည် ပညာရေး ဆော့ဝဲလ် များ မှ ဂိမ်းများ အထိ ပုံစံ မျိုးစုံ နှင့် လာကြသည်။
ပရောဂျက် တစ်ခုစီ ၏ အသေးစိပ် အချက်အလက်များ ကို ဖတ်ရန် more_vert ကိုနှိပ်ပါ။
ဆော့ဝဲလ် များ / ဝဘ်ဆိုက် များ/ အက်ပ် များ
(၂၀၁၈ - ယခုတိုင်)
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်(OS X သာ)
Arduino / လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ
၄ ဘီးသွားစက်ရုပ် more_vert
မှတ်ချက် ။ ။ ကျွန်ုပ် ၏ ဝါသနာများစွာ တွင် ကျွန်ုပ် မကျွမ်းကျင် ပါ။
အောက်ပါ တို့သည် ကျွန်ုပ် အားလပ်ချိန် တွင် စိတ်ဝင်စားမှု အရ ပြုလုပ် ထားသော အရာများဖြစ် သည်။ ၎င်းတို့ သည် အပျော်တမ်း ကာတွန်း ရုပ်ရှင် ဖန်တီးမှု မှ အပျော်တမ်း ချက်ပြုတ်ခြင်းအထိ ပုံစံ မျိုးစုံ နှင့် လာကြသည်။
အပျော်တမ်း ကာတွန်း ရုပ်ရှင် ဖန်တီးမှု
ရှီ ဇန်း နို ယူ ဆူကူရှီ ဆာmore_vert
ကာတွန်း ရုပ်ရှင် ကြည့်ရန်
လက် ဖြင့် လမ်းလျှောက်ခြင်းmore_vert
Quick Traffic ဘယ်လိုလုပ်?more_vert
အပျော်တမ်း သံစဉ် စပ်ခြင်း
နားဆင်ရန် | သီချင်းစာသား
ပန်းချီကား ကြည့်ရှု ရန်
အောက်ပါ တို့သည် ကျွန်ုပ် အား အလွတ်တန်း ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်မာ အနေ နှင့် အပ်နှံ သော နည်းပညာ / ဒီဇိုင်း ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း များဖြစ်သည်။
ပိုင် ၏ စမ်းသပ်ခန်း မှ လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆို ပါသည်။
ဤ တွင် နယ်ပယ် ပေါင်းစုံမှ ဇစ်မြစ် ခံသော သူ ၏ တည်ဆောက်ပြီးနှင့် တည်ဆောက်လက်စ၊ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း နှင့် ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေး၊ အသုံးဝင်သော်ရှိ၊ မဝင်သော်ရှိ ကုဒ်၊ နည်းပညာ၊ Interactive မီဒီယာ စမ်းသပ်မှု အလုံးစုံ ကို ခင်းကျင်းပြသထားသည်။
ဤစာမျက်နှာ သည် ပိုင် ကုဒ်၊ နည်းပညာ စမ်းသပ်မှုများ လုပ်ဆောင် နေချိန်တွင် အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ အလိုလျောက် ပြောင်းလဲ နေသည်။ ထို့ကြောင့် ယခု သင် မြင်တွေ့ နေရသော စမ်းသပ်မှုများ သည် ပိုင် လောလောဆယ် အထိ ပြုလုပ်နေသော စမ်းသပ်မှုများ ဖြစ်သည်။
သတိပြုရန် ။ ။ အချို့ စမ်းသပ်မှု များ သည် HTTPS protocol ပေါ်တွင် မောင်းနှင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ စမ်းသပ်မှု များ အလုပ်မလုပ်ပါက URL ထဲရှိ http ကို https ဟုပြင်ရိုက်၍ ပြန်စမ်းပါ။
ကျွန်ုပ် အား မေးမြန်းရန် မေးခွန်း တစ်စုံတစ်ရာ ရှိပါလား ? (သို့မဟုတ်) ကျွန်ုပ် အား နည်းပညာ / ဒီဇိုင်း ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း အပ်နှံ လိုပါလား ?
အောက်ပါ ပလက်ဖောင်း များ မှ တစ် ဆင့် ကျွန်ုပ် အား ဆက်သွယ် ရန် ပလက်ဖောင်း တစ် ခု ကို နှိပ်ပါ။
သို့မဟုတ် အောက် တွင် ကျွန်ုပ် ထံ စာ တစ်စောင် ရေးသား နိုင်ပါ တယ်။
ပြီးပြီ။ စာပို့မယ် ။